सर्वश्रेष्ठ लंगर निर्माता र कारखाना मा ड्रप | जिंगगोong
ड्रप-मा लंगर एक preassembled विस्तारक प्लग संग आंतरिक थ्रेड विस्तार लंगर छन्। लंगर को यो प्रकार ठोस आधार मा फ्लश माउन्ट अनुप्रयोगहरु को लागी प्रयोग गरीन्छ सामाग्री। लंगर सेटिंग उपकरण को उपयोग गरेर एंकर को तल तिर विस्तार प्लग ड्राइभिंग द्वारा सेट गरीएको छ। सही विस्तार र विशेष रूप मा निर्मित प्लग लंगर को पूरा विस्तार सुनिश्चित गर्दछ।
यी लंगर जस्ता मढ़वाया वा स्टेनलेस स्टील उपलब्ध छन्।
हामी प्रत्यक्ष कारखाना एंकर र बोल्ट, नट, र शिकंजा को सबै प्रकार को उत्पादन हो।
हामी विदेशी खरीदारहरु संग राम्रो सहकारी सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो, हाम्रो सेवा ग्राहक को पुष्टि प्राप्त भएको थियो र उनीहरु प्रत्येक महिना दोहोर्याउने आदेश राखे। हामी स्टेनलेस स्टील 304 र स्टेनलेस स्टील 316 जस्तै उत्पादनहरु को नयाँ श्रृंखला उत्पादन हुनेछ, र हामी ग्राहकको माग पूरा गर्न को लागी हाम्रो सबै भन्दा राम्रो प्रयास!
कार्टन+काठ फूसमा वा ग्राहकको आवश्यकता अनुसार थोक।
दृष्टि र लक्ष्य
हामी विदेशी बजार को अन्वेषण र हाम्रा उत्पादनहरु लाई अधिक प्रयोगकर्ताहरु लाई लाभ उठाउन दिनेछौं। हामी राम्रो सामाग्री, सटीक कारीगरी, सख्त निरीक्षण, भरपर्दो गुणस्तरीय, पूरा विनिर्देशन र शीघ्र वितरण मा रहनेछौं, हाम्रो पार्टनर राम्रो आयात अनुभव छ र उनीहरुलाई व्यापार मा मद्दत गर्न को लागी!
Vison र गोल
हामी विदेशी बजार को अन्वेषण र प्रयोगकर्ताहरु लाई अधिक विकल्प छ दिनेछौं।
२०२१ सम्म स्टेनलेस स्टील ३०४ र स्टेनलेस स्टील ३१6 उत्पादनहरु पनि बजारमा ल्याउनेछन्।
Q: तपाइँ ट्रेडिंग कम्पनी वा निर्माता हुनुहुन्छ?
A: हामी कारखाना हौं।
Q: के तपाइँ हाम्रो लोगो को उपयोग स्वीकार गर्नुहुन्छ?
यदि तपाइँ एक ठूलो मात्रा छ, हामी बिल्कुल OEM स्वीकार गर्दछौं।
A: सामान्यतया यो 5-10 दिन हो यदि सामान स्टकमा छ। वा यो 15-20 दिन हो यदि सामान स्टक मा छैन, यो मात्रा अनुसार हो।
Q: तपाइँ नमूनाहरु प्रदान गर्नुहुन्छ? यो नि: शुल्क वा अतिरिक्त हो?
A: हो, हामी नि: शुल्क शुल्क को लागी नमूना प्रस्ताव गर्न सक्छौं तर भाडा को लागत तिर्न सक्दैनौं।
A: भुक्तानी <= 1000USD, अग्रिम 100%। भुक्तानी> = 1000USD, 30% T/T अग्रिम, पहिलो पटक ग्राहकहरु को लागी, हामी एल/सी स्वीकार गर्न सक्छौं
अघिल्लो: स्लीभ एंकर
वेज एंकर मा छोड्नुहोस्
एंकर मा लिप ड्रप
स्टेनलेस स्टील लंगर मा ड्रप